ဒေါ်စုအမှု (၂၇-၇-ဝ၉) တရားခွင်သို့ မြန်မာ့အလင်းသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ရ | Save Burma
ပြည်သူတွေဆီမှာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူညီမျှမှု အရင်ဆုံး ရှိနေမှ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုအမှု (၂၇-၇-ဝ၉) တရားခွင်သို့ မြန်မာ့အလင်းသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ရ
ဒေါ်စုအမှု တရားခွင်သို့ မြန်မာ့အလင်းသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ရ
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 27 ရက် 2009 ခုနှစ် 21 နာရီ 51 မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုအတွက် အပြီးသတ် လျှောက်လဲသည့် ဒုတိယမြောက် ယနေ့ တရားခွင်သို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားသည့် သတင်းဌာနတခု ဖြစ်သည့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှ သတင်းထောက်များမှအပ ပုဂ္ဂလိက စာနယ်ဇင်းသမားများ တက်ရောက်ခွင့် မရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အင်းစိန်ထောင်တွင်း တရားခွင်သို့ ယခင်အပတ် သောကြာနေ့က လာရောက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည့် သံရုံး ၅ ရုံး မပါဝင်ဘဲ ကျန်သည့် သံရုံးအချို့မှ သံတမန်များ တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ သတင်းဌာန မြန်မာ့အလင်းကိုသာ တက်ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ လျှောက်လဲချက်ပေးရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုတွဲမှ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ ဒေါ်ဝင်းမမနှင့် မစ္စတာယက်တောတို့ ၃ ဦးအတွက် လျှောက်လဲချက် တင်သွင်းရာ ပြီးပြတ်ခြင်း မရှိသဖြင့် မနက်ဖြန်သို့ ထပ်မံ၍ ရုံးချိန်းခဲ့သည်။
“ဒီနေ့မနက် ၁၀ နာရီမှာ ရုံးစပြီးထိုင်ပါတယ်။ စထိုင်ထိုင်ချင်းကို ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနဲ့ ဒေါ်ဝင်းမမ တို့ရဲ့ ရှေ့နေအတွက် ဦးလှမျိုးမြင့်က လျှောက်လဲချက်ပေးပါတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ မစ္စတာ ယက်တောရဲ့ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဦး လျှောက်လဲချက်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ ၂ ယောက် ပြီးတော့ ခေတ္တ Break လုပ် တယ်” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ဦးဉာဏ်ဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သူက ဆက်ပြီး “တနာရီက ပြန်စတယ်။ ပြန်စတော့ အစိုးရရှေ့နေက လျှောက်လဲချက်ပေးတယ်။ အဲဒါ ရုံးနားတဲ့ အချိန် ညနေ ၅ နာရီအထိပဲ။ ၅ နာရီမှာ အစိုးရှေ့နေပြီးသွားတော့ တရားရုံးက မနက်ဖြန် ၁ဝ နာရီကို ဆက်ချိန်းတယ်။ မနက်ဖြန် ၁ဝ နာရီမှာ ကျန်တဲ့လျှောက်လဲချက်တွေ ဆက်ပေးရဦးမယ်” ဟု ပြောသည်။
သူတို့ လျှောက်လဲခွင့် ရသည့်အချိန်သည် အစိုးရရှေ့နေ ဦးမြင့်ကြိုင်အတွက် ရရှိသည့် အချိန်ထက် နည်းခဲ့သည်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဆိုသည်။
အစိုးရရှေ့နေက ဒေါ်စုသည် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းနှင့် ၁၉၇၄ ခု အခြေခံဥပဒေသည် အသက်ရှိသေးသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အမှုစွဲဆိုခြင်းသည် တရားဝင်ကြောင်း လျှောက်ခဲ့သည်။
ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သက်သေတဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မိုးမိုးက ၁၉၇၄ ခု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် အာဏာသက်ရောက်မှု မရှိတော့သဖြင့် ဤ ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်း ခုခံချေပထွက်ဆိုခဲ့သည်။
ယခုလ ၂၃ ရက် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဒေါ်စုအား ပြစ်မှုကျူးလွန်သဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြထားခြင်းသည် တရားရုံး ဂုဏ်သိက္ခာအား “ကျဆင်း” စေသည်ဟု တရားရုံးသို့ ယနေ့ လျှောက်လဲခဲ့ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
“ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ တရားရုံးက မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး။ ဒီအခြေအနေမှာ သူတို့ ဒီလို ရေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ တရားရုံးကို လျှောက်တယ်။ (၁) တရားရုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေတယ်။ (၂) တရားရုံးကို လွှမ်းမိုးချင်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ (၃) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရားရုံးရဲ့ အကာအကွယ်ကို မရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့ လျှောက်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
၂၃ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒီမိုကရေစီအရေး ဆောင်ရွက်သောကြောင့် “နိုင်ငံရေးပြစ်မှု” ဖြင့် အရေးယူခံရခြင်း မဟုတ်ဘဲ “တည်ဆဲ ဥပဒေတရပ်” အား “ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်” သောကြောင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ လျှောက်လဲချက်အတွက် တရားရုံးက ယနေ့ မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
မနက်ဖြန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများက အစိုးရရှေ့နေ၏ လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်ရှင်းလင်းချေပမည်ဖြစ်သည်။
မစ္စတာယက်တော ရင်ဆိုင်နေရသည့် စည်ပင်ယာသာဥပဒေနှင့် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားမှုအတွက် ၎င်း၏ ရှေ့နေကလည်း လျှောက်လဲဦးမည်ဖြစ်သည်။
Written by Lwin Aung Soe July 27, 2009 at 11:35 pm
« World focus on Burma (27 July 2009)
Aung San Suu Kyi verdict due on Friday »
အင်တာနက်ပေါ်မှ မြန်မာ စာအုပ်များ	အင်တာနက်ပေါ်မှ မြန်မာစာအုပ်များ	လတ်တလော မြန်မာ့ ဒေသန္တရ နိုင်ငံရေး (ထိုင်းနိုင်ငံ)	Home	ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်သော စာအုပ်များ E-Books (မြန်မာ)	Special Page Pinheiro’s Report
ဗီအိုအေ (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. သျှမ်း သံတော်ဆင့်An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Google Latest News on BurmaScientists find feathered dinosaur tail preserved in amber - Pulse Headlines December 9, 2016Nupi Lan: Second Manipur Women's Agitation, 1939-40 - The Sangai Express December 9, 2016Democratic Myths In Myanmar's Transition – Analysis - Eurasia Review December 9, 2016UN calls on Burma's Aung San Suu Kyi to halt 'ethnic cleansing' of Rohingya Muslims - The Independent December 9, 2016Govt preparing response after false 'Daily Mail' report - Eleven Myanmar December 9, 2016Confronting corruption is essential for democracy - The Hill (blog) December 9, 2016This telltale tail shows dinosaur feathers in 'exquisite detail' after 99 million years - Washington Post December 9, 2016Govt plans response to 'false' Daily Mail story - Eleven Myanmar December 9, 2016Dinosaur Tail Found in Chunk of Amber - The Irrawaddy News Magazine December 9, 2016Kayin State, Myanmar: The state of peace - Livemint December 9, 2016 Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Free Burma RangersAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)Diplomatic Missions issue statement on humanitarian access to northern part of Rakhine State December 9, 2016Special Adviser to the Secretary-General on Myanmar reiterates concerns over Northern Rakhine State December 9, 2016Thais book Suzuki final spot with Myanmar demolition job December 9, 2016Six Wa drug traffickers die in gunfight with Thai army December 9, 201611 killed in northern Myanmar rebel clashes: state media December 9, 2016Saw Tha Wah December 8, 2016Explaining Myanmar’s foreign policy behaviour: Domestic and international factors December 8, 2016Catholic church hit in ongoing fighting in Shan State December 8, 2016Shan State parliament approves proposal to brand NA-B terrorists December 8, 2016Malaysian Ambassador summoned over rally, remarks December 8, 2016 အလိမ္မာ စာမှာရှိ (မာယာ Online magazine)အဝေးကပေးစာတစောင် - ယာတောကသာဗြော August 26, 2016 Maung Aye Winဒေါင်းအမိ ရွှေရင်တီး ရေးသူ- မင်းသုဝဏ် June 12, 2016 Maung Aye Winမော်စီတုန်း စာအုပ်ရေးသူ - အောင်ဇံ June 6, 2016 Maung Aye Winမာယာရှင်ကိုအေးဝင်း ရေးသူ - ဖိုးသံ (လူထု) May 30, 2016 Maung Aye Winအို……သံတိုင်တို့ May 24, 2016 Maung Aye Winအဝေးကိုလိမ့်သွားတဲ့ ပန်းသီးတလုံး ရေးသူ - မော်မင်းသန်း May 24, 2016 Maung Aye Winထိုသစ်ပင် ရေးသူ - မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) May 24, 2016 Maung Aye Winလမင်းဟာမွေးနေ့ရှိခဲ့တယ် ရေးသူ - ညီလင်းညို May 22, 2016 Maung Aye Winကောင်းကင်ရှိရင် တောင်ပံခတ်မယ်၊ မြေသားရှိရင် အပင်ပေါက်မယ် ရေးသူ - မောင်မှိုင်းလွင် (အင်းဝ) May 21, 2016 Maung Aye Winဆေးနွမ်းပန်းချီ ရေးသူ - မောရူးဆိုး May 21, 2016 Maung Aye Win ဧရာဝတီ (မြန်မာဆောင်းပါး)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. မဇ္ဈိမ (မြန်မာ)မမျှတသည့် ရလဒ်များထွက်ခဲ့သော မန်ယူအသင်း အဆင့် ၃ အတွင်း ဝင်သင့်ဟု မော်ရင်ဟိုပြော December 10, 2016မြောက်ကိုရီးယားက နျူကလီးယားလက်နက် ပစ်လွှတ်နိုင်သော်လည်း ပစ်မှတ်ကို ရောက်အောင် မထိန်းချုပ်နိုင်သေး December 10, 2016ဟာနန်ဒက်ဇ်ကို ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့တွင် ခေါ်ယူရန် လီဗာပူးလ်နှင့် စပါးမျက်စိကျ December 10, 2016ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုရရန် မိမိတွင် အရည်အသွေးရှိဟု ဘာလော့တယ်လီပြော December 10, 2016ထိုင်းတွင် ပြည်နယ်ငါးပြည်နယ် ရေကြီးမှု ကြုံနေဆဲဖြစ် December 10, 2016ကစားသမားခြောက်ဦးထိ လူစားလဲခွင့်ရရန် ဂွာဒီယိုလာ ဆန္ဒရှိ December 10, 2016ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်ထုတ် မဇ္ဈိမ ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းစာ မျက်နှာဖုံး December 10, 2016လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ ပက်ဂွန်ဟေး လွှဲပြောင်းပေးအပ်၊ ပြည်သူများအား တောင်းပန် December 10, 2016ရီးယဲလ်အသင်း ဒေါ့မွန်နဲ့ ကစားတဲ့နေ့မှာ ဗာရန်းရဲ့ နေအိမ် လုယက်ခံရ December 10, 2016ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၉ ဦး၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၆၂ ဦးထိရှိ December 10, 2016လူထုအသံ	RFA (မြန်မာ) နားထောင်ရန်အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-10 01:29 December 10, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-09 17:29 December 9, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-09 14:29 December 9, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-09 13:29 December 9, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-09 01:29 December 9, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-08 17:29 December 8, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-08 14:29 December 8, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-08 13:29 December 8, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-08 01:29 December 8, 2016အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2016-12-07 17:29 December 7, 2016 နားထောင်ရန် Burma Democratic Concern’s podcastAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. နားထောင်ကြစို့An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN world newsObama orders review of election-related hacking December 9, 20165 ways the US can stop hackers December 9, 2016Trump stuns ex-CIA boss with Russian hack denial December 9, 2016Ex-CIA chief: Russian hackers trying to 'mess with our heads' October 18, 2016South Korea's parliament votes to impeach President Park Geun-hye December 9, 2016 Newsweek politicsAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.Meta	Register	Log in